ရန်ကုန် မိုးပျံအမြန်လမ်းတည်ဆောက်ရေး လ၀က်အတွင်း ကုမ္ပဏီ ၂၀ခန့် လျှောက်ထား - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂ – ရန်ကုန် မိုးပျံ အမြန်လမ်း စီမံကိန်းတည်ဆောက် ရေး အတွက် လ၀က်အတွင်း ကုမ္ပဏီ ၂၀ခန့် လျှောက်ထားကြ ကြောင်း သိရသည်။
မိုးပျံလမ်း စီမံကိန်းအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုလျှောက်လွှာ (EOI) ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန က မေ ၁၈ရက်တွင် ခေါ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“စီမံကိန်းကို အဆင့်သုံးဆင့် နဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ပထမ အဆင့်က EOI လို့ခေါ်တဲ့ စိတ် ၀င်စားမှုကို အရင်ဈေးကွက်ရှာ တဲ့အဆင့်ပေါ့၊ ပြီးမှ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှု တင်ဒါခေါ်မယ်။ ICT (International Competitive Tender) အဆင့်ပေါ့။ ကိုယ်တို့ က အချက်အလက်တွေ၊ ဒီဇိုင်း တွေပေးမယ်၊ တတိယအဆင့် RFC ပေါ့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနဲ့ တွက်ချက်တာတွေ ဆောင်ရွက် မယ်၊ နိုင်ငံတကာမှာ လည်း ဒီလို ပဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ဇွန် ၂ ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။
လတ်တလော လျှောက်လွှာ တင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများထဲ တွင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခု ပါဝင်ပြီး လျှောက်လွှာတင်ထားသော ကုမ္ပဏီစာရင်းများကို ဇွန် ၂၉ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မိုးပျံလမ်းမှာ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အောက်ပုဇွန် တောင်လမ်း၊ သံသုမာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပဂေါက်ကွင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာအ၀ိုင်း၊ မင်္ဂလာ ဒုံစက်မှုဇုန်၊ ခရေပင်လမ်း၊ ဘုရင့် နောင်ဘက်မှ ကမ်းနားလမ်း ကွန် ကရစ်) လမ်းအထိ ၄၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက စီမံကိန်းကို အပိုင်းလိုက် ခွဲကာ PPP တင်ဒါများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ World Bank အဖွဲ့ဝင် International finance Corporation(IFC) အကူအညီနှင့် ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဆောက်လုပ်မည့် မိုးပျံတံတား ပေါ်တွင် ပုဂ္ဂလိကယာဉ်အများ စုသာ သွားလာနိုင်ပြီး တည် ဆောက်ခွင့်ရသည့်ကုမ္ပဏီက လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောသည်။
မြင်းခြံမြို့နယ် ဖက်ပင်အိုင်ကျေးရွာမှ အမြွှာညီအစ်မသုံးယောက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို လေးဘာ??
မြန်မာလုပ်သားကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်သော ထိုင်းနိုင်ငံသားအား အခင်းဖြစ်စဉ်ကို သရုပ်ပြစစ်ဆေး
လူဦးရေ ၂၅ဝဝ ကျော်ခန့် နေထိုင်နေသော ညောင်ဦးမြို့နယ်မှ ကျေးရွာနှစ်ရွာ၌ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ??
တာချီလိတ်မြို့နယ် မယ်ခေါင် ရပ်ကွက်အတွင်း လောင်းကစား ဂိမ်းခုံများနှင့် မူးယစ်လေလွင့် လူငယ်
အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဂျိုးဘိုင်ဒင် မဲဆွယ် စည်းရုံး
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲ (သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်)ကို အောက်တိုဘာ ၄
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် အတွင်းရှိ လယ် ၂၈၅ ဧကကို လယ်ယာမြေ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးချေး?